Ejiri LG Velvet na Snapdragon 765G nke Qualcomm | Gam akporosis
E mepụtara LG Velvet: mara nkọwa ya niile na nkọwa nnweta
Mgbe amachara ya ihe karịrị otu oge, e mepụtara ọhụụ ọhụrụ LG Velvet ma bido ya n'ụke. Enweghi nkọwa banyere njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ya, ebe ọ bụ na onye ọrụ South Korea emeelarị nkọwa niile.
E gosipụtara ngwaọrụ ahụ dị ka ọnụ ahịa ọhụụ ọhụụ na ahịa. Dị ka anyị tụrụ anya ya, ọ na-abịarute na otu n’ime ihe ndị kacha ike Qualcomm chipsets taa. All nkọwa nke smartphone na-akọ n'okpuru.
1 Ihe niile banyere LG Velvet ọhụrụ
Ihe niile banyere LG Velvet ọhụrụ
Anyị na-eche ọdụ ụgbọ elu etiti. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya na igwe na-arụ ọrụ dị elu, nke ahụ bụkwa n'ihi atụmatụ ya, nke pụtara ìhè dị oke mma, nke pụtakwara na ihe owuwu ya bụ klas dị elu. LG chọrọ imejuputa a curved iko -nke a maara dị ka 3D aak design-, ihe anyị na-ahụkarị naanị na flagship ụdị; Ihe atụ nke a bụ Mi 10 sitere na Xiaomi, nke na-abịa na ogwe ogwe aka.
Kwa se, na Velvet ihuenyo bụ nnukwu-banyere 6.8 inches-, nke na-eme ka ngwaọrụ buru oke ibu. Nke a bụ teknụzụ OLED ma na-akwado obere bezels dị elu na ala nke na-arụkọ ọrụ ọnụ iji kwado usoro ntanetị 20.5: 9 nke ekwentị na-etu ọnụ.
Mkpebi nke LG Velvet na-ewepụta ka amabeghị. N'agbanyeghị nke a, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na ụdị panel ahụ bụ Cinema FullVision. O kwesịkwara iburu n’uche na ahụ na-ejide ihe ngebichi ahụ bụ nke enyo na ọla.
Chipset dị n'okpuru mkpuchi nke njedebe arụmọrụ a bụ Qualcomm Snapdragon 765G, octa-core chipset na-egosipụta isi agglomeration maka arụmọrụ pụrụ iche kwa ụbọchị: 1x Kryo 475 Prime (Cortex-A76) na 2.3 GHz + 1x Kryo 475 Gold (Cortex-A76) na 2.2 GH + 6x Kryo 475 Silver (55) Cortex-A1.8) na 620 GHz. Adreno 8 GPU bụ onye na-abịa na nhazi a ma na-ahụ maka igbu egwuregwu na ọdịnaya ọtụtụ, ebe nchekwa RAM na ebe nchekwa dị n'ime nke 4 GB LPDDR128X na 2.1 GB UFS XNUMX, karị, bụ ihe ngwaọrụ nwere.
una Batrị ikike 4.300 mAh na-ahụ maka idebe ngwaọrụ jupụtara n'ike, n'otu oge nke igwefoto azụ atọ nke 48 MP (isi ihe mmetụta) + 8 MP (obosara) + 5 MP (oghere macro maka foto dị nso) yana 16-anụ ọhịa A na-etinye MP ihu n'ihu iji nye foto nke ezigbo mma.
Velvet, nwere Snapdragon 765G, nwere njikọ 5G. Ọ bụkwa mmiri na-enweghị ekele maka akwụkwọ IP68 ọ na-etu ọnụ. Enyere akụkụ ya dị ka 167,1 × 74,1 x 6,4 na ịdị arọ ya bụ gram 180, nke dị ịtụnanya n'ezie maka iburu nnukwu batrị dị otu a ma dịkwa ogologo. Ekwentị ahụ na-ejikwa sistemụ arụmọrụ nke gam akporo 10 wee bịa na onye na-agụ akara mkpisi aka.
"Anyị nwere obi ụtọ banyere Velvet, ọ bụghị naanị n'ihi na ọ bụ 5G smartphone pụrụ iche, mana n'ihi uru pụrụ iche ọ na-eweta site na asụsụ ọhụụ anyị."Chang Ma, onye isi osote onye isi oche nke atụmatụ ngwaahịa na LG Electronics Mobile Communications Company kwuru.
IKIRU 6.8-inch OLED ihuenyo na 20.5: 9 akụkụ ruru
Ohere TERLỌ N'IME 128 GB nke UFS 2.1
GHARA CAMERAS Triple 48 MP (isi) + 8 MP (obosara akụkụ) + 5 MP (ghara ịma mmetụta)
UMUAKA 4.300 mAh na nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa
Atụmatụ ndị ọzọ Na-enyocha akara mkpisiaka / ihu ihu / 5G
Mbibi na ibu ibu 167.1 × 74.1 x 6.4 / 180 gram
Dịka ọmụmaatụ, enwere nkọwa ụfọdụ ka a mara maka LG Velvet. Anyị nwere olile anya na onye nrụpụta South Korea ga-akpọsa ha na Mee 7, ụbọchị a ga - eme ya ọkwa na ahịa ma anyị ga - amata ọnụahịa ya na nkọwa nnweta ya, bụ nke ka dị na nzuzo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » E mepụtara LG Velvet: mara nkọwa ya niile na nkọwa nnweta
NEBULA Capsule mini projector nyocha